DUBIA(P-TIMES) – Dawladda Imaaraatka Carabta qeybtaada Xanaanada Xoolaha iyo Badqabkooda ayaa ku dhawaaqday in ay xayiraadii ka qaaday Xoolaha uga yimaada Suuqyada Soomaaliya oo ay ugu horeyso dekeda magaalada Boosaaso, taas oo xayiraad ay saarneyd 10-kii sanno ee lasoo dhaafay, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada Dubia ee dalka Imaaraatka.
Imaaraatka ayaa kamid ahaa dalalka qaadan jiray xoolaha ugu badan ee Soomaaliyeed, balse 10 sanno kahor ayaa la joojiyey xiligaas oo ay Imaaraatku sheegeen in ay cuduro qabaan xoolaha Soomaaliya.
Madaxdii iskaga dambeysay Puntland, gaar ahaana Madaxweynaha hadda xilka haya Siciid Cabdullaahi Deni ayaa labadii safar ee uu ku tagay dalka Imaaraatka Carabta wuxuu kala hadlay sidii xayiraadan loo qaadi lahaa.
Malaayiin Dollar ayaa kasoo gasha Soomaaliya xoolaha nool ee ay u dhoofiso wadamada Carbeed, waxayna Sacuudiga iyo Imaaraatku yihiin suuqyada ugu waa weyn ee ay gayso, waxaase la marinayay sannooyinkii u dambeeyey dalka Oman.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhawaan la kulmay Ganacsatada Suuqyada Imaaraatka iyo Madaxda Bad-qabka xoolaha oo uu kala hadlay sida ay muhiimka u tahay in la wanaajiyo xariirka labada dhinac, xayiraadana laga qaado xoolaha Soomaaliya.
Talaabada ay qaaday Imaaraatka dad badan ayay u tahay mid wanaagsan, maadaama Ganacsiga Soomaalida ee xoolaha nool uu yahay mid kamid ah waxyaabaha waa weyn ee ay Soomaalidu ku tiirsan tahay.